"Thrones को खेल" बाट Bron - अभिनेता Dzherom Flinn। प्लट, वर्ण र टिभीमा श्रृंखला को अभिनेता
Bron ( "Thrones को खेल") जो श्रृंखला पाउन सकिन्छ वर्ण को सयौं, को छ। उहाँले लड्न आफ्नो क्षमता लागि दर्शक द्वारा सम्झना छ। को श्रृंखला प्रत्येक वर्ण, यो यसको कमजोरी छ गर्छ। छ मौसम लागि भृतक को Lannisters आफ्नो लोयल्टी कायम। तर यो आफ्नो अभियुक्तहरुलाई दोषी कारण हो, र वित्तीय पक्ष संग। Bron यो परिवार छन् भनेर पैसा धेरै रुचाउनु छ।
श्रृंखला बारेमा जानकारी
परियोजना एक अमेरिकी को brainchild छ। यो लेखक द्वारा उपन्यास मा आधारित सिर्जना गरिएको थियो जर्ज आर आर मार्टिन। भनिन्छ आफ्नो काम को चक्र "आइस को गीत र आगो।" मिति, हामीले शूटिंग "Thrones को खेल" थिए - सिजन 7। श्रृंखला शुरू 2011 मा भएको थियो। यसको निर्माताहरू बेनियफ र Weiss छन्।
को सुटिङ उत्तरी आयरल्याण्ड, आइसल्याण्ड, मोरक्को, क्रोएशिया र माल्टा ठाउँ लिए। टेलिभिजन श्रृंखला "Thrones को खेल" को अभिनेता धेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
काम अमेरिकी टेलिभिजन सबैभन्दा ठूलो-बजेट परियोजनाहरू पर्छ। हिंसा, यौन दृश्यहरू, गाली को overabundance बाबजुद श्रृंखला दर्शक देखि उच्च प्रशंसा छ।
कार्य "Thrones को खेल"
उपन्यास को टिभी संस्करण यसको प्रतिलिपि छैन। टेलिभिजन श्रृंखला "Thrones को खेल" को निर्माताहरू र अभिनेता सधैं पुस्तकको नायक जस्तै बाटो जाने। यस कार्यले मध्ययुगीन युरोप समानता छ जो एक काल्पनिक संसार, मा स्थान लिन्छ। विश्व प्रत्येक सिजन लामो समय को लागि रहन्छ कि फरक छ। घटनाहरू लामो गर्मी को अन्त मा सुरु गर्नुहोस्।
यो श्रृंखला storylines र वर्ण को एक किसिम भरिएको छ, तिनीहरूलाई केही सबैभन्दा अप्रत्याशित क्षणमा मर्छन्।
प्रभावशाली परिवार शक्ति लागि सङ्घर्ष - जो फलाम सिंहासनको, सबै सात राज्यहरू माथि लाभ बिजुली मा बस्न गर्नुपर्छ;
उत्तरी पर्खाल, बाहिर बाट सक्ने अलौकिक खतरा रखवाली जो आदेश, गर्न विरोध;
घर फर्कने र फलाम सिंहासनको, एकचोटि उनको परिवार belonged थियो जो लागि संघर्ष सामेल मित्र पत्ता लगाएर पूर्व को मुलुकमा मार्फत उनको ड्रागन संग यात्रा निर्वासनमा राजकुमारी।
श्रेणीमा, त्यहाँ पूर्ण सकारात्मक चरित्र छ। सबै वर्ण तिनीहरूलाई प्रत्येक इच्छित लक्ष्य आफ्नो बाटो बाँच्न र फेला पार्न प्रयास, विवादित कार्यहरू प्रतिबद्ध संभावना छ।
वर्ण Bron को उपस्थिति
पहिलो पटक Bron ( "Thrones को खेल") को लागि प्रसङ्ग देखा "Cripples, Bastards र भाँचिएको कुराहरू।" नायक लड्न फरक क्षमता छ, त्यो तरवार र धनु पोख्त छ। युद्धमा समयमा उहाँले आक्रमण शक्ति र चपलता र गति भर छैन। अत्यधिक लोभ को विशिष्ट चरित्र मानिसको रूपमा, मुद्रा को लागि उहाँले विभिन्न कुराहरू लागि तयार छ। आफ्नो लोभ भन्दा अक्सर प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा उहाँलाई सहभागी हुन डर यद्यपि, अन्य मानिसहरू खिसी। वर्ण टिभी श्रृंखला कसरी देखा छ गर्नुभयो?
Brawn Tyrion Lannister (द्वारा प्ले पूरा Piter Dinkleydzh) मुद्रा को लागि उनको कोठा हरेस सहमत, होटल मा। तर, त्यही समयमा यो लिन्छ Tyrion कैदी Keytilin STARK (Mishel Feyrli द्वारा प्ले) र Bron को ईगल गरेको नेस्ट उनको साथ दिनु गर्न लिइएको छ। बाटोमा तिनीहरूले डाँकुहरूको द्वारा आक्रमण, तिनीहरूले छुटकारा गर्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
Tyrion उहाँलाई मदत गर्न सक्छ जसले कुनै एक इनाम प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। लडाकू यी शब्दहरू याद र ईगल गरेको नेस्ट मा एक Duel मा Lannister लागि लड्न सहमत छ। उहाँले उसलाई मार्न, को प्रतिद्वन्द्वीको harasses र शरीर को precipice खाली हुन्छ। भृतक एक बौना संग महल छोडेर।
सँगै तिनीहरूले पृथ्वीको नदीमा Tywin Lannister (Charlz ओडार द्वारा प्ले) मा जानुहोस्। त्यहाँ STARK संग लडाई लागि तयार एक सेना हो। भृतक युद्ध को पूर्वसन्ध्या मा बौना वेश्या Shai गर्न वासस्थानमा जान्छ। तिनीहरूले संवाद, र अर्को दिन ग्रीन दांता मा युद्धमा जीत। थप Bron Thyrion सञ्चालन जारी छ, र त्यसपछि आफ्नो भाइ जेमी गर्न आय (प्ले Nikolaj Coster-Waldau)।
राजधानी, Bron ( "Thrones को खेल" सिजन 2) आइपुगेपछि को बौना को व्यक्तिगत अंगरक्षक र शहर हेर्ने को कमाण्डर बन्नेछ। उहाँले राजधानी को रक्षा को योजना मा भाग Stannis Baratheon (द्वारा प्ले Stiven Dilleyn), जो आफ्नो भाइ को मृत्यु पछि सिंहासनमा आफ्नो अधिकार दावी।
को Blackwater भृतक उछाल युद्ध मा एक जंगली आगो सल्काउनुभयो सकेन। यो विस्फोट उहाँलाई Stannis छिटो नाश। किनभने राजधानी मा परिवर्तन को Bron पोस्ट को कमान्डर हटाइयो, तर knighted पुरस्कृत गरियो। अनावश्यक सूत्रपात सिजन3मा भयो। अब देखि, महोदय कन्सोलबाट साथै, भृतक आफूलाई Bronn Blackwater भनिन्छ।
मृत्यु देखि मुक्ति
यस श्रृंखला को निर्माताहरू रूपमा, unceremoniously र पनि हत्या क्यारेक्टर थियो, यो असम्भव बाँच्न गर्ने अग्रिम थाहा छ। तसर्थ, जीवन कुनै पनि खतरा नायक को मृत्यु मतलब गर्न सक्नुहुन्छ।
5 Bron ( "Thrones को खेल") सिजन आफ्नो Tienan pricked जो विष चुपी देखि मर्न सक्छ। तर त्यो उहाँले सबैभन्दा सुन्दर महिला उनको स्वीकारे के को लागि एक विषको असर रोक्ने औषघि उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले त्रिस्टान मा आफ्नो हात जुटाउने dared भन्ने तथ्यलाई लागि भृतक दण्ड छैन। यो Hotah लागि हुनत अझै पनि Bron अनुहार मा थिच्नुहोस्।
Lannister सेना संग राजाको अवतरण नाइट मा आइपुगेपछि पछि घेर Riverrun पठाइएको छ। तुरुन्तै हुनत छैन, उहाँले क्रममा शिविरमा नेतृत्व भन्ने जेमी अनुरोध पूरा गर्न सहमत छ।
पछिल्लो समय भृतक मिथुन मा भोज मा देख्न सकिन्छ, त्यसपछि उहाँले फिर्ता जेमी राजाको अवतरण संग आए।
सिजन7"Thrones को खेल" मात्र 2017 को गर्मी मा अपेक्षित छ। त्यसपछि हामी थप भृतक भयो के थाहा हुनेछ। सायद, यो तिनीहरूले श्रृंखला को निर्माताहरू बनाउन जस्तै, एक प्रारम्भिक मृत्यु अपेक्षा छ, र शायद यो सबै 8 मौसम पास हुनेछ।
Bron ( "Thrones को खेल") एउटा अंग्रेजी अभिनेता खेल्छ। उहाँले Bromley 16.03.1963 वर्षमा जन्मेको ज्ञात छ। आफ्नो बुबा, एरिक, एक अभिनेता र गायक थिए। आमा फर्न, कला सिकायो। अभिनेता Pembrokeshire बसोबास आज, यो अठार को उमेर संग आयोजित यसको शाकाहारी दृश्य लागि ज्ञात छ।
Dzherom Flinn 1986 मा देखा पर्न थाले। उहाँले आगो केनी प्ले। छ वर्ष पछि, त्यो प्रहरी टेलिभिजन श्रृंखला धेरै एपिसोड मा तारा अङ्कित। उहाँले एक गुप्तचर Hargreaves को भूमिका मिल्यो।
को बीसौँ शताब्दीको नब्बे को दशक मा, Flynn एउटा संगीत क्यारियर मा आफ्नो हात खोजे। उहाँले जोडी को एक सदस्य थियो "Robson र जेरोम।" ब्रिटिश चार्ट को शीर्ष यो समयमा खडा भएको जोडी द्वारा धेरै हिट को संस्करण कवर।
ब्रिटिश टेलिभिजन शो मा भाग लिएर "तपाईं शाही रगतको हो कि लाग्छ त्यसैले?", अभिनेता बाहिर फेला एक प्रत्यक्ष संतान छ Oliver मिल्टन को को मातृ पक्षमा।
अभिनय र संगीत क्यारियर साथै टेलिभिजन शो स्कोरिङ, Flynn आफ्नो हात निर्देशन मा खोजे। 2007 मा, त्यो एक कम बजेट तस्वीर, protagonist को भूमिका खेलेका जो सिर्जना गरियो। फिल्म "कुनै न कुनै तरिका इतिहास" जेरोम Rude जीवन देखि धेरै एपिसोडको हुन्छन्। उहाँले धेरै स्वतन्त्र सिनेमाहरू Pembrokeshire को स्क्रीन मा देखियो।
कुल, अभिनेता बारेमा तीस भूमिकाको मा तारा अङ्कित। सबैभन्दा लामो काम को भाग हो "Thrones को खेल।" अभिनेता सात अधिक वर्ष को लागि श्रृंखला मा तारा अङ्कित।
अमेरिकी कल्पना नाटक अभिनेता आफ्नो समयमा दर्शक र आलोचकहरु को पहिचान जित्यो। उहाँले हतियार रूपमा उनको प्रदर्शन को लागि सबै भन्दा प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार को एक लागि नामांकित भएको थियो।
अभिनेता संग जोडिएको जो छन् श्रृंखला, को तथ्य:
श्रेणीमा, Dzherom Flinn योर्कशायर मा, उत्तरी अंग्रेजी उच्चारण वार्ता। उहाँले अभिनेता दक्षिणी केन्ट बाट निवासी किनभने, उद्देश्य यसलाई गरिरहेको छन्।
उपन्यास मा जर्ज मार्टिना Bron जेमी Dorn पठाइएको छैन। नाइट विवाह Lollis, उनको साथ राम्रो निको।
दर्शकहरूले उहाँले पाँचौ सिजन मा कार्य जो हतियार द्वारा गीत, सुन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो गायन क्यारियर विगतका सजिला अभिनेता।
सोभियत अभिनेत्री Svetlana Orlova
रोमाञ्चक "Underworld 2: विकास": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
ब्रह्माण्डको Garri Pottera। Muggle - यो हुनुहुन्छ?
Stanislav Bondarenko संग चलचित्र, देखेर लायक
Alyson Michalka: Filmography, जीवनी र सेलिब्रेटीहरू को व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
लीन मासु - एक स्वस्थ आहार लागि अपरिहार्य उत्पादन
Sergey Losev: जीवनी र काम
Nilov मरुभूमि सहारा "ऊर्जावान", "Metalist" र "Filatov।" समीक्षा, फोटो र मूल्यहरू
पनीर, साल्सा र सिमी: nachos लागि सस
एक टाउको दुखाइ देखि आवश्यक तेल के छ? समीक्षा र समीक्षा
कीव मा खेल महल: प्रदर्शनी
"Dacha क्षमादान": वैधता को अवधि 2015 सम्म विस्तार
चलचित्र र राजकुमार ओलेग को उपलब्धिहरू
लामो जम्प कसरी गर्न
साइकेटिभकर, ओपेरा र ब्यालेट थिएटर: इतिहास र मुग्ध पार्ने संगीतको। साइकेटिभकर मा सबै भन्दा राम्रो थिएटर
नेटवर्क प्रोटोकल - यो के हो? आधारभूत नेटवर्क प्रोटोकल
फेसन डिजाइनर Vika Gazinskaya: जीवनी र फोटो